कोरोना महामारीमै ६० वर्षे बृद्धले गरे २३ वर्षे युवतीसँग बिबाह – Dainik Sangalo
कोरोना महामारीमै ६० वर्षे बृद्धले गरे २३ वर्षे युवतीसँग बिबाह
August 22, 2020 590
एजेन्सी – विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालरुमा श्रीमान श्रीमतीबिच दिँनहु हुने झ गडाका विषय हामीले सुन्ने गरेका नै छौ । श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेको र श्रीमती अर्केसँग भागेको समाचार पनि देखिरहेका हुन्छौ ।
तर भारतको झारखाण्डमा भएको एक घटनाले भने सबैलाई चकित पारिदिएको छ । झारखाण्डमा एक महिलाले आफ्नै श्रीमानको दोस्रो विवाह धुमधामका साथ गराइदिएकी छन् ।
झारखण्डस्थित राजनगर जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका ६० वर्षीया वृद्ध ललमोहन महतोले आफुनै श्रीमतीको राजी खुशीमा दोस्रो विवाह गरेका हुन् ।
अझै रोचक विषयको कुरा त तब बन्यो जब ६० वर्षका वृद्धले २३ वर्षकी युवतीसँग दोस्रो विवाह गरे । जेठी श्रीमती सरला महतोको कोखबाट छोराले जन्म नलिएपछि दई दम्पत्तीले दोस्रो विवाह गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सरलाबाट दुई छोरी छन् ।
छोराको चाहानाले नै ललनमोहनले २३ वर्षीय चेती महतोलाई दोस्रो श्रीमतीको रुपमा भित्राएका हुन् ।समाचारपत्रमा खबर छ । श्रीमतीले नै दोस्रो विवाह गरिदिए पछि सो विवाह हेर्न आउनेको भिड लागेको थियो । – प्रतीकात्मक तस्बिर
Prevदुई लाखको भैंसी चोर्ने तीन जना पक्राउ
Nextकोरोना कहिलेसम्ममा नियन्त्रण हुन्छ ? यस्तो भन्छ डब्लुएचओ
डा. केसीले तोडे अनशन, सफाइ कर्मचारीले पिलाए जुस..!
काम सकिएपछि आ*लोचना गरेको भन्दै नेपाल समक्ष चीनको क*डा सर्त,